Wasaaradaha internetka - Muuqaalada
Waad ku mahadsan tahay booqashada boggaga internetka. Ha lagu dhiirigeliyo markaad dhageysato fariin ka timid ereyga Ilaah. Muujimadayada Our Online waxay u adeegi doonaan inay ka faa'iideystaan ​​dhammaan Masiixiyiinta iyo kuwa doonaya inay wax badan ka ogaadaan Rabbiga. Waxaan isku duba ridnay liiska caalamiga ah ee wacdiyada internetka laga bilaabo tiro ka mida wacdiyeyaasha wacdinta ah.
Haddii aad jeceshahay in aad haysato khadadkaaga internetka ee ku yaal boggan, waxaad noogu soo diri kartaa email Cinwaanka email Tan waxaa lagu dying from corruption. Waxaad u baahan tahay Add to view.. Codsigaaga waxaa la siin doonaa tixgelin dhab ah.
Miiska Dhexe ee kor lagu taxay waxaad ku riixi kartaa mid kasta oo ka mid ah xiriirada laga helo tabaha ereyada si aad u hesho khadadka internetka.